WAXAAN OGAANAYNAA NOOCYADA UGU FIICAN EE TUBTA CHERRY EE GOBOLKA MOSCOW - BEERTA
Ma taqaanaa? On the coast of Crimean, cilmiga qadiimiga ah waxay arkeen lafaha miro cherry laga bilaabo qarnigii 9aad ee BC. e.
Iyada oo ka mid ah berry a tubta, noocyada Gold Scythian waxay u taagan tahay midabka huruud ah dhalaalaya. Intaa waxaa dheer in yellowness cajiib ah, waaweyn, hore u bislaaday miraha waxaa lagu kala soocay macaan macaan oo macaan iyo jilicsan. Marka la eego, waxay ku haboon yihiin oo kaliya inay u adeegaan si toos ah miiska, laakiin sidoo kale caano. Dalaggu wuxuu koraa qiyaas dhexdhexaad ah. Iskudhicelka isbeddelka heerkulka, geedka wuxuu ku fidaa ilaa 3 mitir. Waxaa lagu tuntay taajajir shiino ah oo isku dhafan, oo cagaaran cagaar iftiin leh caleemo yaryar. Bannaanka cagaaran waxay ku talinayaan dib-u-habeyn lagu sameeyo dhoobada Gold Scythians ee duurka. Caleemaha cad waa kuwo aan loo qoondeeynin.
Ma taqaanaa? Midabka cad ee tubta cherry ayaa si toos ah u muuqata on jir geed.
Kala duwan ayaa u muuqday 13 sano ka hor. Tilmaamkan qaboobaha ah ee jiilaalka-adag wuxuu ku quruxsan yahay quruxda muuqaalka leh ee miro-buluug aad u buluugsan, oo si fudud u daboolan lakabka khafiifka ah ee wax dhirta ah, isaga oo ka tegaya cidhifyo cad oo muuqda. Qodobbada xoogga leh iyo macaan, qaab-dhismeedku wuxuu u eg yahay hilib calamado ah, lafo kaas oo hore u kala go'ay. Dhirta heerarka qaybta dhexe waa mid aad u sarreeya oo leh taaj sarajoog ah. Noocyada kala duwan ee loo yaqaan 'breeders' ayaa u muuqda in ay yihiin kuwo is-wax soo saar leh, laakin adkaanta adag ee jiilaalka iyo ilaalinta dabiiciga ah ee ka hortagga cudurada, oo ay ku jiraan fayraska.
Alycha Kuban ayaa loo adeegsaday asaas u ah abuurista noocyo badan oo kale. Natiijooyinkaasi waxay keeneen baaritaano badan oo ah kuwa wax soo saarka ah. Jiilka Kuban ee Beelaan, wuxuu si fiican u habeeyey cimilada u dhow Moscow, bilowgii mid kasta (laga bilaabo sanad saddexaad) bisha Agoosto waxay keentaa goosashada mug leh ee miro ballaaran. Foornada quruxda badan ee soodhada casiirka ah ayaa si adag u xirta lafta aan lakabka lahayn. Macaanka macaan ee miro ma aha mid xoqan. Geedku waa uu hooseeyaa, oo leh taaj la isku qurxiyo, oo si fiican loo qaabeeyey oo isfahmey.
Beeralayda reer Belarus waxay soo bandhigeen noocyo kala duwan oo macaan, noocyo kala duwan oo macaan leh, Mara, taas oo ilaa 7 sano oo nolosha ah ku jirta 0,4 dhir. Dhirta sare (illaa 3 mitir) oo ka mid ah tubta cherry this, marka koray, waxay u baahan tahay daryeel dheeraad ah ee muuqaalka taajka. Laga bilaabo Julaay iyo ilaa ku dhowaad illaa Oktoobar, dhirta waxaa lagu qurxiyaa rucubyo miraha huruud ah. Mara waxaa lagu qiimeeyaa beeraleyda si ay uga hortagaan waxtarkooda dabiiciga ah ee fangaska, oo ay ku jiraan kuwa keena kleasterosporiosis.
Nesmeyana tan iyo bartamihii 2000-yadii. Fasalku wuxuu u muuqday mid sarreeya oo xoog leh, isagoo leh qoorno ballaaran. Berry weyn wuxuu ku ciyaaraa muraayadaha casaanka ah iyo guduudka, iyo fiilooyinka asalka casaanka ah ee ku dhow lama hayo lafta. Miro macaanku wuxuu leeyahay dhadhan raaxo leh, taas oo laga yaabo, inuu keeno winemakers in ay u isticmaalaan sida alaabta ceeriin ee wax soo saarka raja cabitaanka. Ka mid ah faa'iidooyinka celceliska wax soo saarka, Bisaylkii hore ee berry, awood u leh inay u dulqaataan gaadiidka muddada dheer (ilaa 4 maalmood). Marka lagu daro khamriga la isku shaandhaynayo, Nesmeyana waxay sidoo kale diyaarisaa dhawr jiilaal.
Waxaa ka mid ah noocyo kale oo isku dhafan, xayawaankani waxaa lagu kala soocayaa is-bacriminta iyo dhalidda wanaagsan, laga bilaabo sannad-sadexaad ama afaraad (0.4 centners xilliga xagaaga). Iyo berry u bislaaday ugu horeysay u muuqdaan horaantii July. Gawaarida hoose waxay ku wareegsan tahay qaje cagaaran oo taajkii leh caleemaha wax yar ka soo baxa dhinaca danbe. Ubax cad waxay ka soo baxaan burooyinkooda laba-labo. In cufan, maqaarka berry adag-ka soo miraha yar yar, midabka cas casuu ku badan yahay guduud, iyo wuxuu hoos u furay hilib casiir leh, oo leh lafta si fiican ku xiran. Cuntada macaan ee miro ayaa si fiican loo ilaaliyaa cabitaannada iyo cuntooyinka macmacaanka ah. Kala duwan ayaa si fudud u qabata hargab dhexmara cimilada dhexe iyo cimilada qallalan ee aan caadi ahayn halkan.
Saaxiib u ah St.
Lagu soo bandhigay St. Petersburg noocyo kala duwan oo cherry ah ayaa si wayn u degay xaafadaha. Geedku wuxuu hoos u dhigaa laamaha taajka ah ee isku dhafan oo leh dabayl gaaban iyo jir yar. Midab badan oo cadaan ah ayaa horeyba u muuqda maalmaha ugu dambeeya ee Abriil. Hase yeeshee, dalaggu wuxuu ka sarraynayaa dhammaan noocyada kala duwan (0.6 centner oo ka mid ah geed kasta) wuxuu bilaabmaa in laga goosto dabayaaqadii July - horraantii Agoosto. Intaa waxaa dheer, geedaha koray, oo siinaya sida badan oo miro ah, waa dhirta la tallaalay sannadkii saddexaad ka dib markii nidaamkan. Goobaha la uruuriyay ayaa si sahlan u qaadaya waddo dheer. Cuncunka liinta leh caleenta jaalaha ah, cayayaanka qoyan ayaa koray qoryaha lafdhabarta, iyo walxaha ku rusheeysanaya casiirka ayaa leh dhadhan macaan oo macaan.
Waa muhiim! Xilliga Bisaylkiisa waxaad u baahan tahay inaad u dhaqdhaqaaqdo, sida miraha macneheedu yahay shimbiraha.
Cherry Red oo leh dillaac jilicsan ee cherry berrinka Skoroplodna faa'iido ee xaafadaha ka soo Shiinaha. Geedku wuxuu keenaa beergooyska ugu horeeya, inta badan sanadka labaad. Oval ee lafta yar, ku qarsoon ee huruud ah ee dhogorta duqsade leh, si sahlan loo kala soocaa saxarka. Berrinka hybrid ee Skoroplodnaya oo laga helay isgoyska ayaa u muuqday inuu yahay hoggaamiye ka mid ah caleenta cherry by content ee fitamiin C. Goosashada xagaaga xilliga xagaaga waxaa ka soo horjeeda duurjoogta May ubaxay ka soo horjeeda taajka ballaaran oo ay sameysey gudcur ee caleenta. Miisaanka yar ayaa ka hortagaya daboolka kala duwan ee noocaan ah in uu si wanaagsan ula qabsado cudurada, iyo weliba barafka iyo dabayshu ma aha oo keliya gobolka Moscow, laakiin sidoo kale waqooyiga Ruushka.
Waa muhiim! Haddii aad leedahay noocyo badan oo hybrid on goobta, ka dibna ma jiraan wax dhibaato ah ee iskutallaabta-pollination.
Tilmaamkan Cherry ayaa magaciisa ku soo bandhigay madow, casaan casri ah oo koraya ballaaran (mid berri ayaa miisaankiisu ka badan yahay 30 garaam). Marka dhadhanka, suufka saafiga ah ee casumb ah ayaa si guul leh u dhajiya macaan iyo dufnaan. Lafaha kaliya ma jeexi karo. Wax-soo-saarka wanaagsan ayaa isbedbeddelaya isbeddelada cimilada, laakiin dhirta lafteeda iyo abaarta, iyo barafku waxay u dulqaadanayaan si ku filan. Geedka samobbledny dhexdhexaad ah wuxuu ku kala duwan yahay suntan iyo oval ballaaran ee celon qarshka ee krone. Ruby Rubery - muddo dheer ku noolaa. Kala duwan ayaa laga helay jinsiyadaha Crimean ee 1969.
Waxyaabaha kala duwan ayaa ka muuqday Akadamiyadda beeraha ee Moscow. K.A. Timiryazeva. Horudhac toos ah ayaa ah beerta caan ah ee loo yaqaan 'cherry coman cherry', oo u soo baxday pollinator. In timirta Timiryazevskaya cherry plum, sharaxaad waxaa jira sifooyin sida xasillooni (geedka si cad u keenaya 0.3 centner of berry sanad walba), xasilooni (ma aha mid cabsi badan ee cudurada fungal), aan qabyo ahayn (waxay noqon doontaa fududahay in la daryeelo), farqiga (xitaa macaanka, xitaa macaanka, inkastoo marmalade ayaa la samayn karaa, ma aha in la sheego isticmaalka cusub).
Geedka laftiisu wuxuu gaari karaa dherer saddex mitir ah, wuxuu leeyahay caleenta aan dhicin oo wuxuu leeyahay taajka caadiga ah ee qaabka shubanka. Warshadu waa is-wax-u-qabso. Berry Burgundy leh diirka dhuuban waxay u egyihiin xiniinyaha yaryar. Gudaha iyaga, saxaro xardhan, oo laga bilaabo lafta lafteeda si fudud ugu danbaysa.
Qaadashada beeritaanka cherry chum ee degaanka cimilada ee Moscow, fiiro u yeelo xaqiiqda ah in aan lagu beeray meelo yar oo qorraxdu jirto. Marka la beero maaha mid aad u macquul ah si loo isticmaalo kiciyaasha kobaca. Si degdeg ah ugu dhaqso si aad u qabato shaqada degaanka isla markiiba ka dib barafka dhalaalaya. Marka la xisaabinayo masaafada u dhaxeysa geedaha mustaqbalka (laga bilaabo 3 illaa 6 m), tixgeli faafinta taargooyinkooda.
Cherry plum plagi may hor istaagi karaan, laakiin leh cayayaanka (labada nooc ee dahab ah, aboor ku duuban, geedka shchitovik) ujeedooyin ka hortag ah ayaa lagama maarmaan u ah inay dagaalamaan marka ay koraan. Hirgelinta fudud, gaar ahaan mar hore oo ay leeyihiin qaar ka mid ah beeralayda waayo-aragnimo ah, sharciyadu waxay keenayaan farxadda shaqo ee waddanka, iyo raaxo beereed macaan.